Indawo ekahle yokubuka indawo e-Longstenbosu/West Sea I-Perth! Cishe indlu yonke eqashiswayo (kuze kufike kubantu abangu-4 ngenani elifanayo) - I-Airbnb
Indawo ekahle yokubuka indawo e-Longstenbosu/West Sea I-Perth! Cishe indlu yonke eqashiswayo (kuze kufike kubantu abangu-4 ngenani elifanayo)
Sasebo-shi, Nagasaki-ken, i-Japan
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-靖子
U-靖子 Ungumbungazi ovelele
“Siqinisekiswe yiqembu le-Nagasaki Safety. * I-Netflix ifakiwe. Cishe ngemizuzu engu-15 uhamba ngemoto ukusuka e-Haus Ten Bos nemizuzu engu-20 yokufinyelela e-West Sea Pearl Sea.Isiteshi esiseduze yi-Nagasaki Station (cishe amakhilomitha angu-1.5: cishe imizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo), futhi usuka e-Waki Tanokoura Station, lapho i-Nagasaki Airport Express Bus Stop, uhamba ngemizuzu engu-8.　Ikamelo elilodwa eliseduze kwendawo yokungena lizoba yigumbi lomnakekeli, kodwa ezinye izindawo ziqashwa kakhulu futhi ziyimfihlo.Ilungele uhambo lomndeni. Kodwa-ke, ngenxa yendawo eceleni komgwaqo omkhulu kazwelonke kanye nomzila wesitimela, akufanelekile kubantu abazwela umsindo.Ngaphezu kwemibhede engu-2, kunamasethi angu-3 e-futon.
Indlu yami iyindawo engcono kakhulu esuka e-Huis Ten Bosch ne-resort yasolwandle ye-Saikai Pearl. Ngiyayihlonipha imfihlo yamakhasimende, ungayisebenzisa ngokuzizwa ukhululekile ukuqedela indlu eseduze.
U-January 2022 i-Netflix
ibhalisiwe I-January 2022 i-TV, isibuyekezo somshini wokuwasha
‧ Sithenge umbhede omusha olala abantu ababili ngo-August 2018.
4.99 out of 5 stars from 243 reviews
4.99 · 243 okushiwo abanye
I-Sasobo inezindawo eziningi zokuheha ezifana ne-House Tenbosu ne-Nishikai Parthi. Kuye ngesikhathi sonyaka, ungabuye ujabulele imakethe yokubumba nemakethe yetiye!!　Isikhathi eside kunazo zonke e-Japan? Jabulela isifunda sokuthenga sase-Sasobo Arcade, idolobha lasemaphandleni!! Ama-burger e-Sasobo, i-lemon steak, nokudla kwasolwandle nakho kuningi.
Nge-steak ye-lemon, uma ufuna ukujabulela inhlanzi yasendaweni, ngitusa i- "Sawasumi".
Umgomo wethu uwukugcina ubumfihlo bezivakashi zethu phakathi nohambo lwazo, kunokuxhumana ngokuqhubekayo.
U靖子 Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: M420001577
Hlola ezinye izinketho ezise- Sasebo-shi namaphethelo